Previous Article Ọnwụ egbuola Maazị Elaịja Commings
Next Article Onye obiakpọ agbagbuona mmadụ 26 na Tegzas
Trump na Kim Jong-un dịburu na mbụ nwee nkwekọrịta ịnwe nzukọ ịkpa ụbụbọ gbasara otu ndị Nọt Korịa ga-esi kwụsị atụmatụ ịrụpụta ngwa ọgụ nuklịa nke nwere ike ịferu mba Amerịka. Ha kwekọrịtara ịnwe nzukọ ahụ na Sịngapọ n’abalị 12 nke ọnwa Juunu.
Nzukọ ahụ kwesịburu ịbụ nke izizi onye isi mba Amerịka na onye isi Nọt Korịa ga-ezute ihu na ihu.
N’izu ụka gara aga, mba Nọt Korịa na Saụt Korịa kwesịburu ịnwe nzukọ nke ha. Mana Kim Jong-un mechara kagbu ya n’ihi na, ka a ka na-akwado nzukọ ndị a, ndị agha mba Amerịka na ndị agha mba Saụt Korịa gara n’ihu n’ime ngosipute ike nke ha na-adịbu eme kwa mgbe kwa mgbe.
Kemgbe ahụ ka ndị mmadụ na-atụ anya na nzukọ Trump na Kim Jong-un ahụ agaghị enwe isi.
Kim Jong-un kwuru ho ha na ya agaghị akwụsị atụmatụ nuklịa ya kpam kpam, mana ndị Amerịka aghọtaghị ebe Nọt Korịa gbadoro ụkwụ. Trump cheburu na ọ bụrụ na ya na Kim Jong-un zute ihu na ihu, nke ahụ ga-eme ka Nọt Korịa kwụsị atụmatụ nuklịa ahụ ha ji na-aka.